बट्टाई चरा पालनबाट थोरै लगानीमा धेरै आम्दानी लिन सकिन्छ : युवा व्यवसायी सन्तोष परियार – Info Bazar
January 5, 2020by Info Baazaar0 comments
नेपाल कृषि प्रधान देश भएपनी आवश्यक सीप र प्रविधिको अभावमा कृषिमा लागेका मनिसहरु अनु-उत्पादित क्षेत्रमा लागेका छन भने केही युवा बिदेश पलाएन भएका छन । राज्यले पनि देशका युवाहरुलाई उचित सीप र तालिमको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैन । राज्यबाट आउने अनुदान पनि केही हुने खाने र टाठा बाठाको पोल्टामा पुग्ने गरेको छ । लामो समय माओवादी आन्दोलनमा बिताएका ३२ बर्षका युवा व्यवसायी सन्तोस परियार हाल अहिले पोखरा र घान्द्रुकमा लोकल कुखुरा र बट्टाई चरा पालन गर्ने तरखरमा छन । माओवादी आन्दोलन पछी शान्ति प्रक्रियामा आएका माओबादी पार्टी सरकारमा पुगे पछी सन्तोष परियार दलित आयोगको माननीय सदस्य समेत बने । दलित मुक्ति र समस्या समाधानको निम्ति उनी दुई वर्ष खटिएर लागे । उनको खटाई र मेहनतको प्रतिफलले उनलाई बंगलादेश र भारत सरकारका विभिन्न निकाएबाट पनि सम्मानित भई सकेका छन । लामो समयको राजनैतिक जीवनमा बिताएका परियार हाल अहिले आफ्नै मेहनत र लगानीमा लोकल कुखुरा र बट्टाई चरा पाल्ने तरखरमा छन । यसै बिषयमा इन्फोबजार डटकममा संचारकर्मी आश तमु संगको कुराकानी …..
तपाईहरुलाई बट्टाई पालन गर्ने सोच कहाँबाट आयो ?
हामीलाई पहिला असल छिमेकी नाम गरेको सस्थाले चलाएको बट्टाई चरा पालना समबन्धि तालिममा सरिक हुने मौका मिल्यो । यस अघि सम्म म सामान्य आफ्नै सानो तिनो खुद्रा पसल चलाई राखेको थिए । केही नयाँ गर्न सकिन्छ कि भनेर सोचीरहेको थिए । साथी नेपालले चलाएको यो तालिममा मलेसियन नागरिक इन्जीनियर कोङ्ग सँग भेट भयो । उनले नेपालमा व्यवसायीक रुपमा लोप हुदै गरेको लोकल कुखुरा पालन सम्बन्धि अनुसन्धान गर्दै रहेका रहेछन । हामीले उनी संग केही दिन लोकल कुखुरा र बट्टाई पालना समबन्धि तालिम लियौ र घराएसी होम मेड ह्याचर पनि बनाउन सिकौ । उनले पनि काठमान्दुमा बट्टाई र लोकल कुखुराको व्यवसायीका पालन गरेका रहेछन । उनले सिकाएका कुरा र उनको अनुभव र पोखरा बजारमा बट्टाई र लोकल कुखुराको माग सम्भावना देखे पछी मा प्रेरित भए ।
पोखरा बजारमा बट्टाई र लोकल कुखुराको माग सम्भावना देखे पछी मा प्रेरित भए
बट्टाई चरा र लोकल कुखुरा पाल्ने तरखरमा हुनुहुन्छ बजार सम्भावना कस्तो छ ?
बट्टाई चरा र लोकल कुखुरालाई बजारको कुनै समस्या छैन । नेपाल मासु जन्य र अण्डामा परनिर्भर छ. हामीले उत्पादन गरे हाम्रै स्थानीय बजारमा यसले स्थान पाइन्छ । अहिले मइले सुरुवाती चरणमा बट्टाई चरालाई प्राथमिकतामा राखेको छु । यसपछी लोकल कुखुरालाई दिने तयारीमा छु । बट्टाई चराको मासु र अण्डाको बजार थुप्रै माग रहेको छ । बजारमा उत्पादन भएकोले पनि बजार धान्न सकेको छैन । माग धेरै भएपछी ।
“पोखरा बजारमा बट्टाई र लोकल कुखुराको माग सम्भावना देखे पछी मा प्रेरित भए”
बट्टाई चराको मासु र अण्डाले बिशेषत के मा फाइदा गर्छ ?
यो चरामा केही बिशेषत गुण भएको चरा हो । अन्य पन्छी प्रजातीमा बडफ्लु लाग्दा पनि यसमा केही समस्या देखिएन । भन्नुको अर्थ यसमा प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको चरा हो । हामीले यसको नियमित रुपमा मासु र अण्डा सेवन गर्दा हामीलाई पनि रोगात्मक क्षमताबाट लड्ने क्षमता प्रदान गर्दछ । बिशेषत यसको नियमित अण्डा सेवन बाट बालबालिकालाई उनको बौद्दिक क्षमता बिकासमा मदत गर्छ । कुखुराको अण्डामा भन्दा चार गुणा बढी पौष्टिक तत्व बट्टाईको अण्डामा पाइने हुनाले यसको अण्डा खान मानव स्वास्थ्यका लागि ज्यादै उपयुक्त छ । बट्टाई चराको मासु तथा अण्डाले शरिरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा बृद्धि गर्नुको साथै प्रोटिनको मात्रालाई सन्तुलित क्षमता गराउछ । यसको मासु स्वास्थ्यका आधारमा हेर्ने हो भने बाथ रोग र मुटुरोग को लागि उत्तम मानिन्छ । यसको मासुमा कम चिल्लो पदार्थ, भिटामिन ए,बी,डी,इ,के र शरीरको लागि चाहिने आवश्यक खनिज पदार्थ पाइन्छ । जापान र भारतमा साना साना हुर्किदै गरेका बच्चाहरुलाई यसको अन्डा खुवाएमा बच्चाहरु मानसिक र शारीरिक तरिकाले बलियो हुने प्रमाणीत भएको छ ।
“जापान र भारतमा साना साना हुर्किदै गरेका बच्चाहरुलाई यसको अन्डा खुवाएमा बच्चाहरु मानसिक र शारीरिक तरिकाले बलियो हुने प्रमाणीत भएको छ”
कति उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ? लगानी कति बाट सुरु गर्नु भयो ?
बिशेषत अहिले नेपालमा मासुको रुपमा बोइलर र गिरिराज बढी प्रयोग भएको पाइन्छ. गाउँ घरमा पनि अहिले लोकल कुखुरा पाउन छाडिसकेको छ । अर्गानिक स्वादको लागी मानिसहरु भौतारिरहेको हामीले देखिरहेका छौ । बेला समय बिदाको समय मानिसहरु अर्गानिक स्वाद लिन गाउघर तिर उक्लेपानी लोकल कुखुराको को अभाव छ । उनीहरु गिरिराज कुखुरामै चित्त बुझाउछान । मेरो लक्ष्य पनि अव कास्कीलाई लोकल कुखुरा र बट्टाई चराको हव बनाउने हो । अहिले मैले बट्टाईबाट सुरुवात गरेको छु । पहिलो चरणमा हामी आफैले बनाएको होम मेड ह्याचरी मेसिनबाट २०० ओटा चल्ला उत्पादन गर्न सफल भयौ । पहिलो उत्पादन स्वच्छ पनि निस्किएको छ र दोस्रो चरणमा ३०० जति निकालौ । अहिले म संग लगभग ५०० जति बट्टाई हुर्कैदै छ । पहिलो बट्टाईले अण्डा पनि दिन सुरु गरेको छ । सुरुवातले मैले धेरै लगानी गरेको छैन मात्र ५० हजार रुपैया लगानी बाट सुरु गरेको हु । मेरो लक्ष्य यो वर्षमा १० हजार बट्टाई उत्पादन गर्ने रहेको छ ।
अहिले हाम्रो देशका युवाहरु रोजगारको खोजीमा भौतारिदै छन । केही युवाहरु बिदेश पलाएन भए भने केही फेरी पलाएन हुने तयारीमा हातमा पासपोर्ट लिएर तयारी अवस्थामा छन । आफ्नै देशमा थोरै लगानीमा पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनलाई मैले यो व्यवसाय अपनाएको छु । बिदेशमा गरिने दुख हामी आफ्नै देशमा गरे ढिलो चाडो अवस्य सफल भैइन्छ ।
This Page Total Views: 2,534